रसियन वैज्ञानिकको दावी, क्यान्सरको उपचार प्राकृतिक पद्धतिबाट गर्न सकिने | Namuna Nepal
गृहपृष्ठ रसियन वैज्ञानिकको दावी, क्यान्सरको उपचार प्राकृतिक पद्धतिबाट गर्न सकिने
संसारका करोडौं मानिसहरु क्यान्सरबाट पीडित छन्। क्यान्सर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा घातक रोग हो। तर रुसी वैज्ञानिक ह्रिस्टो मेर्मेर्सकीले क्यान्सरको प्राकृतिक उपचार पत्ता लगाएको दावी गरेका छन्।
रुसका वैज्ञानिक ह्रिस्टोले घरमै बनाउन सकिने यस्तो औषधी पत्ता लगाएका छन्, जसको प्रयोगले विभिन्न प्रकारका प्राणघातक क्यान्सर रोगबाट बचाउन सक्छ।
काँचको भाँडामा केही गेडागुडी राख्नुहोस् र डुब्नेगरी पानी राख्नुहोस्। यसलाई एक रात यत्तिकै छाडिदिनुहोस् र अर्को बिहान गेडागुडीबाट पानी निकाल्नुहोस् र त्यसलाई राम्रोसँग पखाल्नुहोस्। उक्त सफा गेडागुडीलाई काँचको भाँडामा छोपेर २४ घन्टासम्म राख्नुहोस्। यसपछि टुसाएको गेडागुडी वा क्वाँटी तयार हुन्छ।
लसुनको पोटी, ओखर र क्वाँटीलाई एकैठाउँमा मिसाएर पिस्नुहोस्।
बाँकी १० वटा कागतीलाई निचोरेर रस उक्त मिश्रणमा राख्नुहोस् र सबै कुरालाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्।
उक्त मिश्रणलाई महमा काठको चम्चा प्रयोग गर्दै राख्नुहोस्।
उक्त मिश्रणलाई एउटा काँचको भाँडामा राख्नुहोस् र फ्रिजमा राख्नुहोस्। यसलाई तीन दिनको लागि फ्रिजमा राखेपछि औषधीको रुपमा सेवन गर्नुहोस्।
डा. मेर्मेर्सकीका अनुसार तयार भएको औषधीलाई सुत्नुभन्दा आधा घण्ठा पहिला खानुहोस् र हरेकपटक खाना खानुभन्दा आधा घण्टा अगाडि खानुहोस्। क्यान्सरको उपचारको लागि खाँदै हुनुहुन्छ भने हरेक २ घन्टामा एक–दुई चम्चा सेवन गर्नुहोस्।
हेल्थीटिप्सवर्ल्ड्स नेटका अनुसार डा. मेर्मेर्सकीका अनुसार यो औषधी दीर्घायू र स्वस्थ जीवनको लागि पनि सहयोगी हुनेछ। यो क्यान्सरको उपचारमा एकदमै लाभदायक हुनेछ। जवान देखिन र तागतका लागि पनि यो उपयोगी हुनेछ। यसले शरीरको मेटाबोलिज्म बढाउँछ र मृगौला र कलेजो सफा राख्न पनि यसले सहयोग गर्दछ। यसले शरीरमा रोगको विरुद्ध लड्ने क्षमता पनि बचाउँछ।
पछिल्लाे - जनता टेलिभिजनका पत्रकारलाई धम्की,कार्वाही गर्न महासंघको माग
अघिल्लाे - पोर्चुगलमा एक नेपालीको निधन